News - ရေစိုခံသောအခြေခံသဘောတရား - ရေစိုခံသောအပေါက်ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ရေစိုခံသောနိယာမ၏နိယာမ - ရေစိုခံသောနေရာကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်
ရေစိုခံ Socket သည်ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အချက်ပြမှုစသည်တို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - LED လမ်းမီး၊ LED မောင်းနှင်မှုစွမ်းအား၊ LED မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်၊ မီးပြတိုက်၊ ခရုဇ်သင်္ဘော၊ ရှာဖွေရေးကိရိယာများ၊ စီးပွားဖြစ်စတုရန်း၊ လမ်း၊ ဗီလာအပြင်ဘက်နံရံ၊ ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံစသည်တို့သည်ရေစိုခံသောအပေါက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ရေစိုခံသောနိယာမသဘောတရားကိုသင်သိပါသလား။ ရေစိုခံ Socket ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသိပါသလား။
ရေစိုခံ Socket ၏နိဒါန်း
ရေစိုခံ Socket သည်ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်ပါသော plug တစ်ခုသာမကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အချက်ပြမှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောချိတ်ဆက်မှုစသည်တို့လည်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - LED မီးခွက်၊ LED မောင်းနှင်နိုင်သည့်စွမ်းအား၊ LED display screen, lighthouse, cruise ship, industrial equipment, communication ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ထောက်လှမ်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စီးပွားဖြစ်စတုရန်း၊ လမ်း၊ ဗီလာအပြင်ဘက်နံရံ၊ ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံစသည်ဖြင့်ရေစိုခံရန်လိုအပ်သည်။
စျေးကွက်တွင်ရေစိုခံသောတံဆိပ်အမျိုးအစားများနှင့်များစွာသောအိမ်များတွင်သုံးသည့်တြိဂံ plug ကဲ့သို့သောရေစိုခံသော socket အပါအ ၀ င်၊ များသောအားဖြင့် socket ဟုခေါ်နိုင်သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ရေစိုခံသည်မဟုတ်။ ထိုအခါရေစိုခံ Socket ကိုမည်သို့စီရင်မည်နည်း။ ရေစိုခံတိုင်းတာခြင်းသည် IP ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးရေစိုခံနိုင်မှုသည် IP68 ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ရေစိုခံပလတ်စတစ်အိမ်တွင်းထုတ်လုပ်သူများစွာရှိသော်လည်းစက်မှုနှင့်အိမ်တွင်းအပေါက်များထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်သာရှိသဖြင့်အထွေထွေအိမ်သုံးပစ္စည်းပလပ်ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်မပြေပါ။
အိမ်တွင်းသုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အပြင်ပိုင်းရေစိုခံ Socket၊ 220v10a သုံး plug နှင့် Plug နှစ်ခုတို့ကိုအကာအကွယ်မဲ့အခြေအနေတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ (အကာအကွယ်အဆင့် IP66 သည်မိသားစု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ IP66 သည်လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင်အားကောင်းသောရေမှုန်ရေမွှားဖြစ်ပြီး ၁ နာရီရေ ၁ မီတာအတွင်းစိမ်ပြီးနောက်ရေထဲသို့မဝင်ရ) သတိပြုသင့်သည်မှာ outdoor socket သည်ယေဘုယျအားဖြင့် PC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် anti-aging ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ရေစိုခံ socket ၏နိယာမ
ရေစိုခံသော Socket သည်အထွေထွေ embedded wall socket အပြင်ဘက်ရှိအဖုံးပါသောရေစိုခံသေတ္တာတစ်ခုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သေတ္တာနံရံနှင့်ထိတွေ့ရာနေရာတွင်ရော်ဘာဖျာတစ်ခုရှိသဖြင့်ရေစိုခံနိုင်သည်။ အချို့သောရေစိုခံသောခြေစွပ်များမှာပလတ်စတစ်မိုးရေဒဏ်ခံသည့်အဖုံးဖြစ်ပြီးအလယ်ပိုင်းဖြတ်သောအပေါက်သည်အောက်ဘက်သို့မျက်နှာမူ။ အထူးဖြတ်တောက်သောခေါင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ သုံးဖြတ်လေးဝါယာကြိုး၊ သုံးဆင့် ၅ ခုရှိသည့်ကြိုး၊
ရေစိုခံ Socket ၏တပ်ဆင်ခြင်း
ပထမ ဦး စွာ socket ကိုဖယ်ရှားပါ။ ထို့နောက်ရေစိုခံအဖုံးကို socket ၏နောက်တွင်ထားကာ polarity နှင့်အညီဝါယာကြိုးကို socket ၏ interface နှင့်ချိတ်ဆက်။ fix ပါ (live wire သည် L interface နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ သုညကြိုးသည် N နှင့်ချိတ်ဆက်သည်) Interface နှင့်မြေပြင်ဝါယာကြိုးသည်einterface နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်) ။ အဆိုပါစွဲစေ screw ကိုတင်းကျပ်ရပါမည်, ထိုသို့မြို့ရိုးပေါ်မှာ socket ၏ fixing ဝက်အူထားရန်သာ။ ကောင်း၏။
အိမ်သာသည်အိမ်တွင်စိုစွတ်မှုအရှိဆုံးသောနေရာဖြစ်ပြီးရေကိုရေဖြန်းရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အိမ်သာရှိ Socket ၏ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုရမည် -
၁။ အိမ်သာထဲ၌ socket ကိုတပ်ဆင်သောအခါရေ nozzle (သို့) ရေထွက်ပေါက်မှဝေးသောနေရာတွင်တပ်ဆင်ပါ။
၂။ အိမ်သာအတွင်းရှိ socket အား protective cover ဖြင့်ကာကွယ်ထားရမည်ဖြစ်ကာပလတ်စတစ်အကာအကွယ်ပေးသော film ပါသော switch ကိုရွေးချယ်ရမည်။
၃။ Socket တစ်ခုကို ၀ ယ်သည့်အခါ socket ၏ညှပ်သည်လုံလောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ insertion force သည်လုံလောက်သင့်သည်။ Socket ၏ clip သည်မာကျောသင့်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် socket clip ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ခိုင်မာသည့် extrusion နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် plug နှင့် clip အကြားကိုက်ခဲအားကိုတိုးစေသည်၊ ရေရှည်အသုံးပြုမှုအတွက်အပူဖြစ်စဉ်ကိုရှောင်ရှားသည်။ အလွယ်တကူကျရောက်နိုင်ပြီးလူ့အချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစွမ်းအင်ပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။
4. အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်၌, လက်ခြောက်သွေ့ကြောင်းသေချာအောင်, switch သည်နှင့် socket သုံးစွဲဖို့ရေကိုမဆောင်ခဲ့ပါ။
၅။ ခလုတ်များ၏အရည်အသွေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ထားပါ။ ၎င်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်များသည်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ လူတွေကလျှပ်စစ်မီးကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသုံးရင်တောင်မှယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်တွေရှိတယ်။
ပြင်ပရေစိုခံ Socket ၏တပ်ဆင်ခြင်း
အိမ်တွင်အလင်းရောင်အဆင်ပြေစေရန်လူများစွာသည်လသာဆောင်၊ ရင်ပြင် Pavilion နှင့်အခြားနေရာများစသည့်အပြင်ဘက်တွင် sockets တပ်ဆင်ထားသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်ရှိအခြားအကြောင်းများကြောင့်ခြေစွပ်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
၁။ Socket ကိုမိုးရေမလောင်းနိုင်သည့်ဖုံးကွယ်ထားသောနေရာတွင်တပ်ဆင်ရမည်။
2. အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောရေစိုခံသောတံဆိပ်ကြီးတစ်ခုရွေးချယ်သင့်သည်။ ရေစိုခံသော socket အရည်အသွေးသည်မကောင်းမွန်ပါကပြင်ပစိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင်အသုံးပြုပါကဘေးအန္တရာယ်ကြီးသောအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
3. အခြားမတော်တဆမှုများကိုရှောင်ရှားရန်မိုးတွင်းကာလများတွင်အပြင်ဘက်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းမှုကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ လျှပ်စစ်မီးရှိသောနေရာနှင့်နီးရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
4. Outdoor socket တွင်ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်ခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် professional waterproof socket ကိုအသုံးပြုရမည်။
၅။ အပြင်ပိုင်း plug နှင့် socket ၏ protection level သည်အတော်အတန်မြင့်ပြီး IP55 နှင့်အထက်ကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုပါသည်။